एकै पटक राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्याम्पमा परेका अपरिचित स्यान्सु भुषाल...(भिडियाे प्राेफाइल)
8237 पटक हेरिएको
तीन महिनादेखि परिवार छाडेर फुटबलका लागि नेपालमा रहेका स्यान्सूले व्यवसायिक फुटबल कताबाट खेल्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छैनन् । नेपालमाा असोजदेखि ए डिभिजन लिग सुरु ुहुँदैछ । केहि क्लवले उनलाई प्रस्ताव राखिसकेका पनि छन् । तर उनको कतारी क्लबसँगको सम्झौता बाँकी नै छ । आफूले अहिल्यै निर्णय लिइनसकेको उनले सुनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हरेक खेलाडीको प्रमुख लक्ष्य हो । सबैले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनन् किनभने सीमित खेलाडीले मात्र त्यो अवसर पाउँछन् । १७ वर्षको किशोरवयमै राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा पर्नु स्यान्सु भुसालका लागि सुरुआती करिअरकै कोशेढुंगा हो ।
अर्धव्यवसायिक खेल गतिविधि हुने नेपालको सन्दर्भमा उनको उमेरसमूहका धेरै खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका छन् । स्यान्सुको हकमा माहोल केहि फरक रह्यो । कतारमा हुर्किएका यी मिडफिल्डरसँग घरेलु फुटबलको अनुभव छैन ।
नेपाल सुपर लिगको पहिलो संस्करणमा चितवन एफसीको टिममा परेर अन्तिम खेलमा १० मिनेट अवसर पाएका उनलाई कतार फुटबल संघको सहयोगमा नेपालको राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेबारी पाएका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले ३२ सदस्यीय टिममा बोलाए । कम अनुभवमै प्रशिक्षकले विश्वास गर्नेछन् भनेर उनले चाहीँ सोचेकै रहेनछन्, अर्थात यो खवर उनका लागि अप्रत्यासित रह्यो । त्यसमा पनि कतारबाट बाबाले फोन गरेर सुनाएपछि के चाहियो र !
प्रारम्भिक टोलीमा परे पनि उनी इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र विश्वकप तथा एसिया कप छनोटका खेलहरुका लागि अन्तिम टोलीमा छानिएनन् । यसमा उनलाई कुनै गुमासो छैन । किनभने पहिलोपल्ट बन्द प्रशिक्षणमा पर्नु नै उनका लागि तत्कालको ठूलो सफलता हो । राष्ट्रिय टोली विदेशमा रहँदा उनी सातदोवाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा एक्लै प्रशिक्षण गरिरहेका थिए ।
राष्ट्रिय टोलीको उमेरसमूहबाट प्रतिनिधित्व नगरेको र घरेलु फुटबलको ज्ञान नभए पनि स्यान्सूमा फुटबलको आधारभूत ज्ञान भने औषत नेपाली खेलाडीको भन्दा बढी छ– एनएसएल क्लब चितवन एफसीका प्रशिक्षक मेघराज केसीको टिप्पणी हो यो । पाँच वर्षको उमेरदेखि दोहामा बसोबास गरिरहेका स्यान्यूले फुटबललाई जीवनको अभिन्न अंगजस्तै बनाए । घरेलु फुटबलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबरे उनी पूर्ण अपडेट रहन्छन् । कतारको शीर्ष डिभिजनको क्लबको एकेडेमीमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
विश्वकपको आयोजना निश्चित भएपछि कतारले फुटबलमा लगानी खन्याइरहेको छ । उसले आफ्नो देशमा फुटबल संस्कारको विकास गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका विभिन्न देशका नागरिकका बीचमााख वर्कर्स कप आयोजना गर्दै आएको छ । त्यसका लागि नेपालीहरुको पनि टिम नबन्ने कुरा भएन । नेपाली फुटबल टिम कतारबाट पनि स्यान्सूले खेल्दै आएका छन् । यो प्रतियोगितामा नेपाल सधैं शीर्ष चारभित्र पर्ने गरेको छ ।
कतारी फुटबललाई नजिकबाट देखेका स्यान्यूले नेपाल र कतारका खेलाडीको स्तर त्यति फरक पाएका छैनन् । फरक छ त आत्मविश्वासको ।
राष्ट्रिय टोलीबाट डिफेन्सिभ मिडफिल्डमा खेल्ने सपना बोकेमा उनी फ्र्यांक लाम्पार्डका समर्थक हुन् । नेपालमा चाहिँ रोहित चन्दको खेल खुवै मनपर्छ । सायद उनले आफ्नो पोजिसन पनि यी आईडिएल खेलाडीलाई हेरेरै निर्धारण गरेका हुन् कि ?
राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परेपछि स्यान्यूको आत्मविश्वास बढेको छ । प्रशिक्षकको शैली र टिमका अन्य सदस्यको ब्यबहारबाट पनि उनी प्रभावित भएका छन् । त्यसैले आफ्नो सपना छिट्टै पूरा हुनेमा आशाबादी छन् ।